Sajhasabal.com | Homeकाठमाडौँ सहित यी ७ जिल्ला कोरोनाको 'रेडजोन'मा, कहाँ कति संक्रमित ?
प्रधानमन्त्रीलाइ प्रतिनिधिसभामा अवरोध नआएको जिकिरः मङ्गलबार पनि बहस हुने
'संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न मिल्दैन'
सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा भएको आगलागी नियन्त्रणमा
२४ घन्टामा २६६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण,मृतकको संख्या कति ?
बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकार नेपालमा पनि ३ जनामा भेटियो
हुम्लामा महिलामाथि बलात्कार
आज नेप्से परिसूचक १७.३१ अंकले बढ्यो
सुदूरपश्चिम प्रदेश : पानीघट्ट लोप हुँदै
बझाङको एक स्थानीय तह बाहेक सुदूरपश्चिमका सबै तहमा वित्तीय पहुँच
साउन २६, काठमाण्डौ | नेपालमा कोरोना महामारी बढेको छ । लकडाउन खुलेसँगै काठमाण्डौ सहित बिभिन्न जिल्लामा गतिबिधि बढेको कारण कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको पाइएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार काठमाण्डौमा ९० जना र ललितपुरमा दुई जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । योसँगै काठमाण्डौमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७ सय ९० पुगेको छ । सरकारले दुई सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्लालाई रेड जोनमा राख्दै सुरक्षा मापदण्डमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ ।
सक्रिय संक्रमितको स्थितिलाई हेर्दा काठमाडौँ नेपालमै दोश्रो जोखिमयुक्त जिल्लाको सूचीमा परेको छ । पर्सापछि काठमाण्डौ सङ्क्रमित धेरै भएको जिल्ला बनेको छ । पर्सामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९ सय ३ छ भने काठमाडौँमा ७ सय ९० सक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौँका अधिकांश संक्रमित पछिल्लो दुईसाता यताका हुन् ।
कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा धेरै रहेका जिल्ला अन्तर्गत काठमाण्डौ, रौतहट, महोत्तरी र पर्सारहेका छन् ।
पाँच सयभन्दा धेरै सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरुलाई मन्त्रालयले उच्च जोखिम भएका जिल्ला भनेको छ । यस्तै दुई सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला पनि बढी जोखिम मानिएको छ । सर्लाही, धनुषा र मोरङमा सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या दुई सयभन्दा धेरै छ । यसरी ७ जिल्लालाई सरकारले रेड जोनमा राखेको छ ।
यस्तै खोटाङ, धनकुटा, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा भने हाल कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित छैनन् ।